खशोग्गी हत्याकाण्डलाई सामसुम पार्ने कोशिश — टर्की, साउदी अरब र अमेरिकाको षड्यन्त्र
साउदी पत्रकार जमाल खशोग्गीको हत्यासम्बन्धी समाचार (र गलत सूचना) लाई ट्रम्पका आलोचकहरूलाई पठाइएको बमको समाचारले दबाएको छ । अब खशोग्गी घटना चाँडै नै समाचारपत्रका अग्रपृष्ठ र टीभी शोहरूबाट बिलाउनेछ ।
हुन पनि वाशिङटन र साउदी अरबमा धेरै मानिस यही चाहन्छन् । हतियारका ठेकेदारहरू साउदीहरूसँगको ठेक्कापट्टालाई जोगाउनका लागि सक्रिय भएका छन् । साउदीहरूले खाडी र बेलायतमा आफ्ना मिडियाको प्रयोग गरेर घटनालाई दबाउन खोजिरहेका छन् ।
तीन हप्तासम्म चलेको झूट र षड्यन्त्र सिद्धान्तको शृंखलापछि वाशिङटन, रियाद र इस्तानबुलका निरंकुश शासकहरूले एउटै कथा बुन्न थालेका छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयिप अर्दोआन एउटै सुरमा गीत गाउन थालेका छन् ।
साउदीहरूले खशोग्गी इस्तानबुलस्थित वाणिज्य दूतावासबाट बाहिरिएको कथा भन्न छोडेका छन् अनि उनी धक्कामुक्का हुँदा मारिएको भन्ने झूटो कथालाई पनि त्यागेका छन् । उनको सुनियोजित हत्या भएको कुरामा साउदीहरू आइपुगेका छन् र त्यो अलिकति भएपनि पत्याउन सकिने कुरा हो ।
ट्रम्पले अमेरिकी कंग्रेसलाई घटनाको अनुसन्धान गरिने बताएका छन् र अहिले कंग्रेसको सत्र चलिरहेको छैन । त्यसमाथि कंग्रेसले परराष्ट्र मामिलामा राष्ट्रपतिलाई दुर्लभै रूपमा चुनौती दिन्छ । अझ अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारका विषयमा त झनै दिँदैन । ज्यारेड कुशनरले आफ्ना ससुरा ट्रम्पलाई साथी बिन सलमानको समर्थन गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । दुई देशबीचको सम्बन्ध एकजना मानिसको जिन्दगीभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको कठोर तर्क उनले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनसमक्ष एउटै मात्र चुनौती छ : मोहम्मद बिन सलमानलाई कसरी यो हत्याबाट चोख्याउने होला ?
वाशिङटनमा रहेको साउदी लगानीको एउटा थिंकट्यांकका विज्ञ हुसेन इबिशले यो काण्ड सामसुम पार्न तीनवटा कदम चालिएको बताएका छन् :
पहिलो, अर्दोआनले दिएको भाषणमा मोहम्मद बिन सलमानको नामै लिएनन्, राजा सलमानप्रति सम्मानजनक शब्द खर्चे अनि टर्कीसँग रहेको भनिएको अडियो रेकर्डिङको चर्चै गरेनन् । द वाशिङटन पोस्टका अनुसार, सीआईएकी निर्देशक जिना हास्पेलले ती अडियो टेप सुनेकी छन् र त्यसको बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बताएकी छन् ।
दोस्रो, अमेरिकाले विगतको एक हप्ता मोहम्मद बिन सलमानले मंगलवार यिादमा आयोजित वैश्विक लगानी सम्मेलनका क्रममा पाएको अभिनन्दनमा बढी ध्यान दिएको छ । उनले त्यसको एक दिनपछि दिएको भाषणका मसिना कुरामा ध्यानै दिइएन । बिन सलमानले घोषणा गरे, ‘धेरैजना यो दुःखदायी घटनालाई माध्यम बनाएर टर्की र साउदी अरबबीच फाटो ल्याउन चाहन्छन् तर उनीहरू यसमा सफल हुने छैनन् ।’
तेस्रो, सबै पक्षको कथा बिस्तारै एउटै किसिमको हुँदै गएको छ । साउदी अधिकारीहरूले खशोग्गीको हत्या सुनियोजित थियो भनी स्वीकार गरेका छन् र अर्दोआनले पनि आफ्नो भाषणमा त्यही कुरामा जोड दिएका थिए । यसो गर्न शायद जिना हास्पेलले चाँजो मिलाएकी हुन् । (हास्पेलले यो समझदारी गराएको हुनसक्ने सुझाव रमाइलो छ तर त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।)
के चाहिँ निश्चित छ भने घटनाको जिम्मेवारी लिएर बिन सलमानलाई बचाउनका लागि एकजना मुर्गा तयार पारिँदैछ । त्यसो गरिँदा खशोग्गीलाई न्याय दिइएको जस्तो पनि देखिने अनि बिन सलमान आफैंले अनुसन्धानको जिम्मा लिएको जस्तो पनि हुने देखिन्छ । यो कदम यसो हेर्दा त हास्यास्पद देखिन्छ तर यसले केही समयका लागि भएपनि तीनै पक्षको स्वार्थलाई पूरा गर्छ ।
यसो हुँदा अर्दोआनले शक्तिशाली तथा कटु दुश्मन साउदी अरबको साथ र शायद केही पैसा पनि प्राप्त गर्नेछ । कुशनरले समस्यामा परेको आफ्नो घरजग्गा कारोबारका लागि आर्थिक स्रोत समेत प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना छ । ट्रम्पले अर्बौं डलर बराबरको हतियार सम्झौता पनि अघि बढाउन पाउनेछन् जसले गर्दा अमेरिकामा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने झूटो दाबी उनले गर्न पाएका छन् ।
अनि मोहम्मद बिन सलमानले के पाउँछन् त ? उनी देशमा प्रतिपक्षीहरूमाथि दमन गर्ने अनि मध्यपूर्वमा सबैतिर इरानको सामना गर्ने आफ्नो एजेन्डाको अमेरिकाबाट निःशर्त समर्थन कायम राख्ने आशा गरेर बसेका छन् ।
सीआईएका लागि साउदीको विश्लेषण गर्ने पूर्वअधिकारी ब्रुस राइडेल यो सबै कुरामाझ यमन युद्ध समस्याका रूपमा रहेको बताउँछन् । बिन सलमानले सन् २०१५ मा शुरू गरेको यो युद्ध हूतीहरूमाथिको शीघ्र विजयमा टुंगिने अपेक्षा थियो । हूती यमनमा रहेका शिया समुदायका विद्रोहीहरू हुन् र उनीहरूलाई शायद इरानको समर्थन छ ।
तीन वर्ष बितिसक्दा यमन त चक्रव्यूह साबित भएको छ । यमनमा युद्ध अपराध चर्को मात्रामा छ र सिरियामा भन्दा बढी नै मानवीय संकटको स्थिति छ । यो युद्धमा अमेरिकी सरकार मतियारका रूपमा रहेको छ ।
साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले यमनमा गरिरहेको युद्धमा अमेरिकाले भाग नलिएको भएपनि उसले साउदीलाई हातहतियार दिएर सहयोग गरिरहेकै छ । अघिल्लो महिना परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पिओले साउदीहरू नागरिक
हताहतीलाई कम गर्ने कदम चालिरहेका छन् भनी चारित्रि प्रमाणपत्र नै दिएका थिए ।
साउदीहरूले जानीजानी किसान, माछा समात्ने माझी, खाना ओसारपसार गर्ने वाहन तथा पानी आपूर्ति सेवालाई तारो बनाएको दह्रो प्रमाणलाई पम्पिओले बेवास्ता गरे । त्यहाँ एक करोड ४० लाख मानिसहरू भोकमरीको स्थितिमा
रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ । यमन युद्धमा अमेरिकाको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल अर्ल ब्राउनले प्रतिआतंकवादी मिसनका बारेमा मात्र कुरा गरे र यमनका बारेमा केही भनेनन् ।
राइडेलका अनुसार, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले साउदीहरू यमनको खाद्य आपूर्तिलाई तारो बनाएर हूतीहरूलाई आत्मसमर्पणका लागि बाध्य बनाउन लागिपरेको विषयमा केही थाहा छैन भन्छ । ‘उनीहरू युद्धका प्रश्नहरूको उत्तर दिनका लागि कंग्रेससमक्ष कुनै पनि साक्षी प्रस्तुत गर्न चाहँदैनन् । यो ढाकछोपको खेल हो ।’
राइडेलका अनुसार, खशोग्गी हत्याको ढाकछोप गरेर यमन युद्धलाई कायम राखिएमा हूती समूहहरूले साउदीको राजधानीमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिरहनेछन् । यी क्षेप्यास्त्रको स्रोत सम्भवतः इरान हो । ट्रम्प प्रशासन इरानसँग युद्धको बहाना खोजिरहेको छ र यही हतियार आपूर्ति नै उसका लागि राम्रो बहाना हुनसक्छ । ढिलोचाँडो हूतीले प्रहार गरेकोमध्ये एउटा क्षेप्यास्त्र साउदीको कुनै भवनमा ठोकिनेछ र थुप्रै मानिसलाई मार्नेछ,’ राइडेलले भने । ‘त्यतिखेर साउदीहरू के गर्नेछन् ? ट्रम्प प्रशासनले के गर्नेछ ? उनीहरूले आफ्नो शब्दलाई
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले निकै खतरनाक परिस्थिति निर्माण गर्नेछ ।’
खशोग्गी हत्याको ढाकछोप अमेरिकाको स्वास्थ्यका लागि धेरै कोणबाट हानिकारक छ ।
दी एसिया टाइम्समा प्रकाशित जेफरसन मोर्लीको विश्लेषणको भावानुवाद